သွေးသံရဲရဲနဲ့ Lake Blood လို့အမည်ပေးထားတဲ့ OnePlus5ရဲ့ကြော်ငြာ
14 Aug 2017 . 5:33 PM
OnePlus5Smartphone ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus5ဖုန်းမှာ အမြန်ဆုံးသော Qualcomm Snapdragon 835 CPU, Flagship ဖုန်းတွေမှာတောင် မတွေ့ရသေးတဲ့ 8GB RAM နဲ့ အတူလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ Megapixels အရ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Dual Camera စနစ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီလို စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ Feature အကောင်းစားတွေပါဝင်နေတဲ့ OnePlus5ဟာ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း $479 နဲ့ $529 ဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့အတွက် အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်တူညီတဲ့ Flagship ဖုန်းတွေထက် ဈေးနှုန်းအရလည်း သက်သာနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် OnePlus ကုမ္ပဏီက သူတို့ရဲ့ လက်ရှိအကောင်းဆုံးဖုန်းကို ကြော်ငြာတဲ့နေရာမှာတော့ တမျိုးဆန်းနေပါတယ်။ Lake Blood လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ၁ မိနစ်နဲ့ ၁၁ စက္ကန့်ကြာမြင့်တဲ့ OnePlus5ကြော်ငြာဗီဒီယိုဟာ OnePlus5ရဲ့ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို အသားပေးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး လူသတ်သမားက လူလိုက်သတ်နေတာကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Smartphone ကြော်ငြာတွေထဲမှာ ဒီလိုမျိုး Idea အသစ်အဆန်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာမျိုး သိပ်မရှိတဲ့အတွက် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ အသည်းငယ်တတ်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့ 😛
OnePlus5Smartphone ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ စှမျးဆောငျရညျအကောငျးဆုံးဖုနျးတဈခုလို့ သတျမှတျထားနိုငျတဲ့ဖုနျးဖွဈပါတယျ။ OnePlus5ဖုနျးမှာ အမွနျဆုံးသော Qualcomm Snapdragon 835 CPU, Flagship ဖုနျးတှမှောတောငျ မတှရေ့သေးတဲ့ 8GB RAM နဲ့ အတူလကျရှိဈေးကှကျထဲမှာ Megapixels အရ အမြားဆုံးဖွဈတဲ့ Dual Camera စနဈတှပေါဝငျနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီလို စှမျးဆောငျရညျနဲ့ Feature အကောငျးစားတှပေါဝငျနတေဲ့ OnePlus5ဟာ ဈေးနှုနျးအနနေဲ့လညျး $479 နဲ့ $529 ဝနျးကငျြပဲရှိတဲ့အတှကျ အခွားသော စှမျးဆောငျရညျတူညီတဲ့ Flagship ဖုနျးတှထေကျ ဈေးနှုနျးအရလညျး သကျသာနပေါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ OnePlus ကုမ်ပဏီက သူတို့ရဲ့ လကျရှိအကောငျးဆုံးဖုနျးကို ကွျောငွာတဲ့နရောမှာတော့ တမြိုးဆနျးနပေါတယျ။ Lake Blood လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ ၁ မိနဈနဲ့ ၁၁ စက်ကနျ့ကွာမွငျ့တဲ့ OnePlus5ကွျောငွာဗီဒီယိုဟာ OnePlus5ရဲ့ ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျကို အသားပေးဖျောပွထားတာဖွဈပွီး လူသတျသမားက လူလိုကျသတျနတောကို ကောငျမလေးတဈယောကျက ဓါတျပုံလှမျးရိုကျတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။
Smartphone ကွျောငွာတှထေဲမှာ ဒီလိုမြိုး Idea အသဈအဆနျးနဲ့ ရိုကျကူးထားတာမြိုး သိပျမရှိတဲ့အတှကျ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျဦးနျော။ အသညျးငယျတတျရငျတော့ တမြိုးပေါ့ 😛
စမတ်ဖုန်းအလုံးရေ ၁၁၈ သန်းရောင်းခဲ့ရပြီး ၂၀၁၈ Ranking မှာ စတုတ္ထဖြစ်လာတဲ့ Xiaomi
Activision က Call of Duty Mobile ဂိမ်းကို တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီ
ဆုရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ Xperia ဖုန်းပဲလိုတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်က ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
2019 မှာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် Battle Royale နဲ့ အလန်းစား မိုဘိုင်းဂိမ်း ၇ မျိုး ပထမပိုင်း